Ewieisɛm A Otu Mpon | Akenkan & Nkyerɛkyerɛ
Ewieisɛm A Otu Mpon
Ɔsɛnkafo 12:13, 14
DZA ƆSƐ DƐ EYƐ: Sɛ edze w’asɛm no reba ewiei a, kã biribi ma onkenyan w’etsiefo no ma womfi hɔn akoma mu ngye dza worusũa no nto mu na wɔmfa nyɛ edwuma.
Ma w’ewiei nsɛm no nye w’asɛntsir no nhyia. Tsĩ w’asɛntsir no nye wo nsɛntsitsir no mu anaa kã ho asɛm wɔ kwan fofor do.
Kenyan w’etsiefo no. Kyerɛ w’etsiefo no dza ɔsɛ dɛ wɔyɛ, nye siantsir a ohia paa dɛ wɔyɛ dɛm. Fi w’akoma mu kasa ma wonhu dɛ egye dza erekã no to mu na no ho hia.
Ma w’ewiei nsɛm no nyɛ tsia na no mu nda hɔ. Mma mmbɔ nsɛntsitsir afofor biara a nnkãa ho asɛm dada no do. Sɛ edze w’asɛm no reba ewiei a, fa nkasafua kakraabi a ibehia dzi dwuma fa kenyan w’etsiefo no bio ma wɔnyɛ dza wɔatse no ho biribi.
Mma mmfa w’ewiei nsɛm no nnkɔ mbirika, na mma mmbrɛ wo ndze adze kɛkɛ mmfa nnwie. Kã nsɛm kakra a otwa tun no wɔ kwan bi do a ɔbɛkyerɛ dɛ edze w’asɛm no aba n’ewiei.
Sɛ edze wo nkɔmbɔ no reba ewiei a, tsĩ nsɛntsitsir a epɛ dɛ wo fiewura no kaa no mu. Sɛ ɔsɛ dɛ wotwa nkɔmbɔ bi do awerɛfir mu a, kã asɛm bi a ɔhyɛ nkuran fa wie. Sɛ obi annye wo annkasa yie mpo a, enye no nkasa wɔ kwan bi do a ɔbɛma ber fofor obenya ɔpɛ dɛ obetsie.
Sɛ erekyerɛkyerɛ wɔ asafo no mu anaa wɔ asɛnka mu a, ebɛn dwuma na ɔwɔ dɛ ema w’ewieisɛm no dzi?
Fa mona Fa mona Ewieisɛm A Otu Mpon
Akenkan Na Nkyerɛkyerɛ​—Ewieisɛm A Otu Mpon
th adzesua 20 kr. 23